Bernie Sanders ma sharciyeyn karaa marijuana amar fulin ah Maalinta koowaad?
Bernie ma sharciyeeyn karaa maalinta koowaad?
Sharciyee Xashiishadda Amarka Fulinta
Bernie Sanders ma sharciyeyn doonaa marijuana maalinta koowaad? Ka dhagayso PodCast ama Ku Daaw YouTube-ka Bernie Sanders Sharci-galinta Marijuana by Amarka Fulinta maalinta koowaad. Soo ogow inuu runtii sameyn karo - waa haddii uu ka adkaado Donald Trump doorashadii 2020 - iyo sidoo kale inuu garaaco dhammaan dimuqraadiyadda iyo sidoo kale sida uu ugu sameeyay jahwareerka Iowa.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan amarada fulinta.
Post laxiriira: Macluumaadka Dhismaha - Halkan Riix Halkan.
"Bernie Sanders ayaa sheegay inuu doonayo inuu joojiyo 1% aan jeclayn sharci dajinta xashiishadda isla markaana uu siiyo 98% taasi. Mise milyaneerro ka joojin kara inuu sharciyo marijuana sharci ku siiyo amar fulin - laakiin dastuurka ma samayn karaa?
Hi, Waxaan ahay Tom oo waad iga heli kartaa anigoo xanaaqsan qareenka cannabis isla markaana gujinaya bartayada websaydhka warshadaha cannabis warsidaha - oo ah macluumaad loogu talagalay wax badan oo ku saabsan warshadaha - oo na keenaya - Bernie Sanders wuxuu caddeyn karaa xashiishadda sharciyeed ee fulinta. ficil?
Qodobka 2aad ee dastuurka ayaa ogol in ficillada fulinta lagu fuliyo sharciga. Donald Trump ayaa qaba in qodobka 2aad uu u oggolaanayo inuu sameeyo wax kasta oo uu doonayo - waxaana maxkamadda impeachment-ka ee senate-ka u muuqda inay xaqiijinayaan arrintaas. Muxuu qodobka 2 si sax ah u leeyahay - wax badan maahan: Waa inuu taxaddaro in sharciyada si aamin ah loo fuliyo. Qodobka 2aad Qaybta 3aad.
Waa maxay amarada fulinta ugu caansan? Bayaankii Xorriyadda ee 1863 - oo macnaheedu yahay in Abe Lincoln ay ahayd inuu u maleeyo addoonsiga inuu yahay mid aan dastuuri ahayn - in kasta oo wax laga beddelay 13-kii aan dhicin illaa 1865.
Iyagu ma aysan bilaabin in loogu yeero Amarada Fulinta ilaa iyo 1907dii. - 1952 - Madaxweyne Truman wuxuu hoos dhigay dhamaan biraha birta gacanta maamulka federaalka - markaa miyeeysaneyaasha bernie miyuu wax uun u yareeyaa hantiwadaaga iyo sharciyeynta xashiishadda amar fulin?
Waa maxay xadka awoodda Awoodda Madaxweynaha ee Adeegsiga?
Ficilkii Trumans wuxuu ahaa mid aad u fog - wuxuu isku dayay inuu sharci sameeyo halkii uu ka caddeyn lahaa falka. Sharciga Maandooriyaha La Xakamey runti waxay ku eedeeyaan Xeer Ilaaliyaha Guud inuu dib u qorsheyn ku sameeyo walxaha iyada oo loo marayo hanaanka maamulka - taas oo asal ahaan macnaheedu yahay waaxda fulinta inay bedeli karto jadwalka - laakiin ma ka gudbi karaan howsha?
Kawaran haddii Bernie uu aaminsanaado waxa aan dhahayey oo dhan iyo mamnuucida xashiishka in ay tahay sharci dastuuri ah midab takoor ku dhisan kuna guuldareysanaya asaaska caqli galka ah qaniinyada qaniinyada dastuurka? Talaabadiisu ma waxay noqon doontaa howsha fulinta ee ah adkeynta dastuurka ee hanaanka xulashada ee uu sameeyay Golaha Sanadkii 1970?
Ka waran haddii taasi aad uga fogaato - si wanaagsan, Koongarasku wuxuu ku dhaqaaqi karaa inuu ku difaaco amarkiisa fulintiisa - laakiin markii laga saaro xashiishadda CSA - si fiican, taasi wax kharash ah kaaga kici mayso fulinta. Marka waa inay dacweeyaan. Laga yaabee in dowlad goboleed run ahaantiis ah - sida Idaho ama Indiana ay dacweyn lahaayeen Mareykanka. Taasi waxay qaadan lahayd waqti in laga shaqeeyo.
Marka haddii Bernie uu rumeysan yahay in jadwalka hadda ee Marijuana uu yahay mid aan dastuuri ahayn isla markaana ay ku kala duwan tahay midab-kala-sooca ku aaddan dhaqan-galinta iyo asal ahaan sharciga uu taageerayo aaminsanaantiisa - hubso inuu sameyn karo.
Laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka gaabsado taas oo uu ku amro maamulkiisa kaliya inuusan ku dhaqmin shuruucda marijuana federaalka maxaa yeelay dhibaatada weyn ee amarada fulintu waxay soo baxaan marka madaxweynayaashu ay ku xadgudbaan awoodooda iyaga oo sameeya sharciyo iyaga oo aan u ogolaanayn gole guurti oo ka taga waajibaadka jira.
Maxaa Bernie Sanders u sharciyeeyn kara Marijuana By Amarka Fulinta
Arintu markay sidaa tahay - wuu sameyn karaa si kasta - laakiin waxaa suuragal ah inaan la dhaqan gelin karin kadib tartan sharci ah.
Waxaa laga yaabaa in jaangooynta amarada fulinta ay door ka ciyaari karto - tusaale ahaan jiheynta maamulkiisa in uusan dhaqan galin shuruucda marijuana halkii ay ka sameyn lahaayeen wax ka bedel sharciyeed oo runtii laga saaro CSA.
Xaqiiqdi waxay noqon laheyd mid la isku khilaafsan yahay - Sida markii aan 1940 xirxiraynay dadka Mareykanka ee Mareykan ah oo aan gelinno xeryo.
Or markii aanu Eisenhower ka daynay dugsiyada dadweynaha. Amaradaas ayaa la isku khilaafsanaa waqtigaas - laakiin looma tartamin.
Sharcinimada Cannabis waa mid caan ah - aadna caan u ah in aan kugu dhufto waxyaabaha aad jeceshahay oo aad iska diiwaangeliso wararka xashiishadda cannabis. Arbacada saacadu markay tahay 2:00 pm.
Marka halkaas ayaad ku haysataa - Bernie ayaa gebi ahaanba qori kara amar fulin
Ha i Khasaarin - waxay ahayd qaladaadka internetka:
Bernie Wuxuu Balanqaaday Marijuana Sharci Ahaan Maalinta Koowaad- Ma Sameyn Karaa?
Waxaa qoray: David Silvers
Galinka dambe ee Caocuses Iowa, Senator Bernie Sander (I-VT) ballan qaaday in la sharciyeeyo marijuana dhammaan 50-ka gobol maalintiisii ​​ugu horreysay ee xafiiska, “iyada oo loo marayo amar fulin.” Sanders wuxuu kaloo ballanqaaday inuu faafin doono diiwaannada shaqsiyaadka loo xiray haysashada, laga yaabee inuu ku dhaqaaqay tallaabo tan la mid ah oo ka timid Guddoomiyaha Pritzker ee Illinois.
Sida ballanqaadyada ololaha oo dhan, waxaa jira culeysyo sharci iyo ficil wax ku ool ah. Xeerka Maandooriyaha La Xakameeyay, ee mamnuuca marijuanaada heer federaal ah. Waxaa jiray a taariikh dheer isku daygii fashilmay ee dib loogu soo celin lahaa xashiishadda CSA. CSA sidoo kale ogolaanaya Xeer ilaaliyaha guud inuu dib u qorsheeyo cannabis iyada oo loo marayo hanaanka maamulka, markaasna laga gudbo Golaha. Si kastaba ha noqotee, habka burburintu waa mid dheer oo xalaal ah, xaqiiqdiina maahan wax Sanders ama qof walbaa ku guuleysan karo Maalinta Koowaad. Xusuusnow, dabcan, in Sanders laga yaabo in uusan Xeer Ilaaliyaha Guud xaqiijin maalin uun.
Waxaa jira hal fursad oo kale. Sannadkii 2013, Ku-xigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka James Cole, oo ka shaqeynaya Maamulka Obama, ayaa dhigay warqad "Tilmaanta ku saabsan Dhaqangelinta Marijuana", oo inta badan loo yaqaan Xusuus-qorka Cole. Cole Memo wuxuu aasaas ahaan siyaasad ka dejiyey Waaxda Caddaaladda ee ka shaqeynta hirgelinta CSA ee waddammada sharciyeysan marijuana. Sanadkii 2018, ka dib Xeer Ilaaliyaha Guud Jeff S fadhi wuxuu ka noqday Cole Memo wuxuuna ka tegey hirgelinta CSA go'aankii xeer ilaaliyeyaasha maxalliga ah. Xusuus-qorka Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Kalfadhiga wuxuu ahaa hal bog oo dheer, kaas oo muujinaya sida ugu fudud ee nidaamka federaalka wax u beddeli karo.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa xoogaa aragti ah meelo sharciga ka duwan, oo ah soogalootinimada. Maamulka Obama wuxuu asaasay laba siyaasadood oo kala duwan oo soogalootinimo, DAPA (Tixraaca Tallaabada loogu talagalay Waalidiinta Mareykanka) iyo DACA (Tallaabada Loogu Baaqay Caruurta ee Imaatinka). DAPA iyo DACA waxay kudhisan yihiin fikirka Xallinta Xeer Ilaalinta, ama fikradda ah in hirgelinta sharci ay leedahay go'aan ay ku go'aamiso goorta la dhaqan-gelinayo sharciga iyadoo lagu saleynayo tixgelinta sida xakameynta kheyraadka iyo baaxadda sharci-jebinta. Hadalka guud, DAPA iyo DACA waa barnaamijyo ay dowladu ku diiday in ay ku dhaqan galiso qawaaniinta soogalootiga qaarkood ee ka dhanka ah noocyada ballaaran ee dadka.
DAPA waxaa la loolan galiyey illaa iyo maxkamadda sare markii loo eego kiiskii 2015 Texas v Mareykanka, halkaas oo 4-4 ah oo ah kala goyn Maxkamadeed oo barnaamijka ka dhigtay meel. Maxakamadda sare ayaa dhagaystay loollan DACA gudaha ah Waaxda Amniga Gudaha v. Diiwaan-gelinta Jaamacadda California, oo go'aan la filayo Juun 2020. In kasta oo ay tani tahay kiis socdaal, waxaa laga yaabaa inay wax badan nooga sheegto inta ay la egtahay heerka ay gaarsiisan tahay dowladda dhexe, ama kiiskan Madaxweyne Sanders, uu u diidi karo inuu meel mariyo dhammaan qayb ka mid ah sharciga federaalka.
Oo ka waran qorshaha Bernie ee ah inuu cafiyo shakhsiyaadka tirada badan ee lagu xukumay haysashada marijuana? Taasi waxay umuuqataa inay tahay su’aal toos ah oo toos ah. Awoodda cafiska ee Madaxweynaha waxaa ku xusan Qodobka II, Faqradiisa 2aad, Faqradiisa 1aad ee Dastuurka Mareykanka. Waxay si fudud u siineysaa “[Madaxweynaha] inuu lahaan doono awood uu ku siiyo ciqaab iyo cafis dambiyada ka dhan ah Mareykanka, marka laga reebo kiisaska la soo eedeyey.” In kasta oo awoodda cafiska ee Madaxweynaha ay ku kooban tahay dembiyada federaaliga ah (oo markaa aan lagu dabaqi doonin xukunnada marijuana ee gobolka), waxaa si guud loo aqbalaa inaysan jirin xadadyo kale oo macno leh oo ku saabsan awoodda cafiska Madaxweynaha.
Dabcan, tani waxay noqon kartaa gebi ahaanba mala awaal - ma ogin inay jiri doonaan madaxweyne Bernie, ama xitaa Democratic Nominee Bernie. Laakiin sida ficil ahaan iyo sharci ahaanba? Maamulka ayaa u muuqda inuu taas soo jeedinayo Haa wuu awoodaa!